BOOSAASO, Puntland- Wareegto kasoo baxday Madaxweynaha dowladda Puntland, ayaa shaqadii looga erayay mas’uuliyiin sar sare oo katirsan Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Puntland.
Dadka shaqada laga eryay waxaa ku jira wasiir ku-xigeenkii Wasaaradda Maxamuud Maxamed Cali (gabax), kaasoo lagu eedeeyay musuq-maasuq.
Madaxweynaha ayaa wareegtadan u cuskaday baaritaan uu sheegay inay sameeyeen guddi la magacaabay 04 bishii April 2018 kuwaasoo loo xilsaaray inay baaritaan ku sameeyay musuq-maasuq lagu eedeeyay Wasaaradda.
Faahfaahin lagama bixin nooca Musuqmaasuq ee Guddigaas sameeyay, balse waxaa wasaaraddan horay loogu eedeeyay inay bixiso Shatiyo Sharci darro ah, kuwaasoo ay cabasho ka keeneen Kalluumaysatada Puntland.
Hoos ka Akhriso Wareegtada kasoo baxday Madaxweynaha Puntland:-
Xeer Madaxweyne Lr. 54 May 2, 2018, kuna saabsan shaqo ka eryid.
Markuu Arkay: Baarista ka soo baxday guddiga baarista iyo soo bandhigista xogta musuqmaasuq iyo maamul xumo ee lagu magacaabay digreetada Madaxweyne MW/DPS/247/04/04/2018
Markuu Tixgeliyey: Talo soo jeedinta Guddiga
Waxaa shaqadii laga eryey Madaxda iyo shaqaalaha hoos ku qoran:-
Maxamuud Maxamed Cali (gabax)
Wasiir ku-xigeenka Wasaarada Kalluumaysiga iyo khayraadka badda
Cali Xirsi Faarax Maxamuud
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda.
Cabdulqaadir Xaaji Yuusuf Siciid Fay Agaasimaha waaxda maamulka ee Wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka badda.
Maxamed Siciid Cartan (Balcad)
Agaasimaha waaxda Kalluumaysiga ee Wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka badda.
Cabdicasiis Axmed Jaamac
Xiriiriyaha Gobolada ee Wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka badda
Cabdi Salaad Maxamuud (Radoofe)
Fidiye Wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka badda.
Casayr Yuusuf Maxamuud
Xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu Madaxweynu, wuuna saxeexay madaxweynuhu.
Gabax ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday sababta keentay xil ka qaadistiisa...